Anycubic i3 Mega: ụdị ihe eji ebi 3D nke na-erughị € 300 | Akụrụngwa n'efu
Anycubic i3 Mega: mma 3D nbipute ihe na-erughị € 300
3D na-ebi akwụkwọ na-aghọwanye ewu ewu. Na mgbakwunye, teknụzụ na-eto, ya mere ogo igwe ndị a na-arịwanye elu, yana nsonaazụ kacha mma yana ọnụahịa dị ọnụ ala. Otu ihe atụ banyere evolushọn a bụ Onye ọ bụlacubic i3 Mega, onye nbipute a kwadoro nke nwere ihe na-erughị € 300. Onyinye na-enweghị atụ na-atụle nsonaazụ na njirimara nke igwe a.
La Akara ọ bụla nwere ọtụtụ igwe igwe na-atọ ụtọ nke ukwuu. N'etiti ha ụdị i3 Mega a. Ọ bụ ụlọ ọrụ China nke hiwere na 2015 na Shenzhen, ihe dị ka ndị ọrụ 300 na-arụ ọrụ ebe ahụ iji mepụta ngwaahịa ndị a. Zụrụ ụfọdụ n'ime mahadum ndị kachasị mkpa mba ụwa iji hụ na ha nwere ikike dị mkpa iji mee ndị ọ bụla chọrọ ịpịpụta ihe nke aka ha obi ụtọ.
Fọdụ ndị nkatọ na-atụ aro na Anycubic i3 Mega bụ ngwa obibi akwụkwọ 3D kacha mma nke 2019 maka ihe na-erughị € 300, ma ọ bụghị maka obere. Want chọrọ ịma ihe kpatara ya?
1 Anycubic i3 Mega Atụmatụ
1.1 Nchịkọta nke njirimara ọrụaka
2 Uru na ọghọm nke Anycubic i3 Mega
3 Ebee ka ịzụta onye nbipute na nnọchi
3.1 Ebee ka ịzụta onye nbipute 3D?
3.2 Ebee ka zụta filament na-anọchi anya
Anycubic i3 Mega Atụmatụ
La Anycubic i3 Mega bụ akara ngosi ka elu, na nkwa (ya na ezigbo ọrụaka ọrụ yana enyemaka mgbe azụtara ahịa) na iguzogide ịnwe nnukwu mbipụta akwụkwọ na-enweghị mmebi ọfụma. Ike ibipụta akwụkwọ na-akwado akụkụ dị mma mbipụta ruo 210x210x205 mm, ya bụ, nke ahụ ị nwere ike ịrụ ọrụ na iberibe nnukwu, ihe ụfọdụ ndị nbipute anaghị ekwe maka ọnụahịa ndị a.
N'ọtụtụ isiokwu, ekwuru m na ị nwere ike ibipụta ụfọdụ iberibe eji Mee N'onwe Gị, n'ihi na ị nwere ike ime ya ...
Gụnyere otu ihuenyo mmetụ ebe ọ ga-egosi nkọwa niile na-arụ ọrụ, dịka okpomoku ọrụ nke isi ma ọ bụ onye na-ewepụta ihe, oge mbipụta, wdg. N'ịdị akọ, ọ na-enye gị ohere ịrụ ọrụ ya ozugbo na-ejighị bọtịnụ n'ụzọ dị omimi karị.
Anycubic i3 Mega na-ekwekwa ezigbo ngwụcha nke akụkụ ndị e biri ebi, yana oke mma. Na ihe akwadoro bụ PLA na ABS, n'etiti ndị ọzọ na-ekwe ka ezi filaments. A na-etinye spatula pụrụ iche na kit ahụ iji wepu ụdọ karịrị akarị mgbe ọ bụla bipụtara. Na mgbakwunye, o nwere onye na-achọpụta filament, yabụ ọ bụrụ na "ink" ahụ agbapụ, ọ ga-akwụsịtụ ka ị nwee ike dochie ndị na-eri ọkụ wee gaa n'ihu ebe ọ na-ebi akwụkwọ, na-enweghị ịtụfu akụkụ ahụ.
A naghị agbakọta ngwa nbipute, mana ya nzukọ bụ nnọọ mfe na ngwa ngwaọbụlagodi na ịnweghị ahụmịhe. Ihe niile amabeghị nke ọma, yabụ onye ọrụ na-enwetụbeghị ụdị nbipute a, agaghị agụ akwụkwọ ntuziaka ahụ. Ọ ga - ezu naanị iji sie ike 8 kposara ma tinye akara atọ na obere ihe ọzọ.
Ma ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụ otu n'ime ngwaahịa ndị China dị ala, eziokwu bụ na ngwaahịa niile nke Anycubic rụpụtara nwere Asambodo European CE, iji hụ na ọ dị mma n'akụkụ niile, yana ndị ọzọ dị ka FCC, na RoHS (gburugburu ebe obibi).
Mgbe ị mepere igbe nke onye nbipute a na-agụnyekarị Anycubic i3 Mega 3D na ngwa nbipute, spatula, 8GB SD kaadị ebe nchekwa, bara uru ọrụ ndu, mapụtara set hotend, random agba ule filament, ngwá ọrụ kit, spool njide na spool. Yabụ, ịnwere ike ịkpọkọta ya wee bido ibipụta ya iji nwalee ya ọ bụrụgodi na ịzụtaghị fịmenti ...
Nchịkọta nke njirimara ọrụaka
Control: mfe iji ihuenyo mmetụ. Ọ nwere ebe nchekwa iji nwee ike ịmaliteghachi mbipụta ma ọ bụrụ na ike apụ wee gaa n'ihu ka ị nwere ike ịhụ na ọnụ ọgụgụ Hulk gara aga. Ọzọkwa, ọ bụrụ na eriri ahụ ga-apụ, ọ kwụsịtụrụ ma na-aga n'ihu mgbe ị na-etinye ihe mkpuchi ọhụrụ na ya. N'ụzọ dị otú ahụ ị gaghị egbusi oge ma ọ bụ ihe na Mbipụta ndị fọdụrụ ọkara ...
Nkà na ụzụ usoro: FDM, ya bụ, site na itinye ihe a wụrụ awụ.
X / Y / Z n'ọnọdu ziri ezi: 0.125mm maka XY na 0.002mm maka Z.
Ọkpụrụkpụ oyi akwa: 0.05-0.3mm
Bipụta ọsọ: 20-100 mm / s
Ihe filament na-akwado: 1.75mm na PLA, ABS, HIPS, Wood, TPU, na ihe PETG
Nozz n'obosara: 0.4 mm
Ọnọdụ okpomọkụ: onye na-emegharị ihe na-arụ ọrụ na 260ºC na akwa akwa dị na 110ºC
Akụkụ na ibu ibu: 405x410x453mm na 11 n'arọ
Sọftụwia sọftụwia: Ogwugwo
Usoro ntinye / mmepụta: STL, OBJ, DAE, AMF / GCode
Ọnọdụ ọrụ- cannwere ike izipu faịlụ maka ibipụta ntanetị site na USB ma ọ bụ na-anọghị n'ịntanetị na-enweghị kọmputa ejikọrọ na kaadị SD.
Uru na ọghọm nke Anycubic i3 Mega
Dị ka ngwaahịa niile, Anycubic i3 Mega nwere uru na ọghọm ya. Ọ bụ ezie na eziokwu ahụ bụ na onye nbipute 3D hapụrụ ndị ọrụ na-anwa ya ezigbo afọ ojuju, yana ihe niile bụ uru ma e jiri ya tụnyere ọghọm ole na ole. Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ndị ọzọ, ọ kachasị mma ị ga-ahụ maka ọnụahịa ahụ.
.Fọdụ bipụtara ihe atụ Iji nweta echiche nke ogo ya zuru ezu na ogo, ị nwere ha na foto izizi. Lee karịsịa na igwe kwụ otu ebe, na ọkwa nke nkọwa ọ na-enweta na yinye.
Ezi ntuziaka, ọrụaka ọrụ na akwụkwọ ikike
Mfe nzukọ na akụkụ ahụ mapụtara gụnyere
Sistemụ na-akpaghị aka ma ọ bụrụ na filament ahụ ga-apụ ma ọ bụ bidogharịa ma ọ bụrụ na enwere ike ike.
Akwa ụra na-ekpo ọkụ (ultrabase) nke na-anọgide na-ekpo ọkụ ka akụkụ ahụ ghara ịgagharị ma nweta nsonaazụ ka mma.
Egosipụta na mgbasa ozi
Nnukwu mbipụta buru ibu
Ogo nke onye nbipute gwụchara iji nye ya ike
Ọsọ ọsọ, interface kensinammuo ọrụ na ihuenyo mmetụ
Na-akwado ụdị dị iche iche na mbipụta SD PCless
Ogo asambodo maka iji nchekwa na ndị China ọzọ
Ọ dị mfe ịchọta filaments dakọtara
Ihe atụ ị na-eweta iji nwalee nwere ike ịbụ nke adịghị mma
Ọ dịghị mfe imeziwanye ma ọ bụrụ na ịchọrọ ya.
Ndozi ihe ndina ahụ bụ nke akpaghị aka ma ọ bụ na-akpaghị aka, yabụ na ị ga-etinye aka, n'agbanyeghị na ọ dịghị mgbagwoju anya ma ọlị.
Ebee ka ịzụta onye nbipute na nnọchi
Nwere ike ịchọta ya na saịtị ụfọdụ na-ere n'onlinentanet, dị ka eBay, Amazon, wdg. Mana iburu n'uche ọrụ nke nyiwe ntanetị, nhọrọ nke Amazon ka mma maka lọjistik yana maka nkwa ndị ọrụ a na-enye.
Ebee ka ịzụta onye nbipute 3D?
Na yountanetị ị ga-ahụ onyinye ndị ọzọ nke otu ihe atụ a karịa € 300, nke bụ ọnụ ahịa dị oke ọnụ nke ị kwesịrị izere, ebe ị nwere ike chọta dị ọnụ ala karịa. N'ezie, ị nwere ike ịchọta otu Onyinye a na - enye ihe ọ bụla dị ihe dị ka € 3.
Ebee ka zụta filament na-anọchi anya
Dị ka onye nbipute, ị nwere ike ịtụ ya site na dị iche iche na-akwado ihe na dị iche iche na agba. Ọ dị na ụlọ ahịa pụrụ iche ma ọ bụ maka ịzụta n'ịntanetị. Iji maa atụ, 1 Kg eriri igwe nke PLA nke agba dị iche iche maka ihe dị ka € 20.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Anycubic i3 Mega: mma 3D nbipute ihe na-erughị € 300
Ihe niile gbasara ụgbọ ala Arduino I2C
Flowmeter: ihe niile ị chọrọ ịma